दक्षिण कोरियाले आविश्कार गर्यो घरमै बसेर १५ मिनेटमै कोरोना चेक गर्ने किट ! – Korea Pati
May 7, 2021 May 7, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दक्षिण कोरियाले आविश्कार गर्यो घरमै बसेर १५ मिनेटमै कोरोना चेक गर्ने किट !
विश्वभर दोश्रो लहरको कोरोना महामारीमा गुज्रिरहेको छ। अझै भनौं नेपाल भारतमा त झन भयावह स्थिति नै सृजना भएको छ।
विभिन्न विकशित देशले खोप आविष्कारको लागि अझै प्रयत्न गरिरहेका छन् यसै शिलशिलामा दक्षिण कोरियाले भने घरमै बसेर आफैले १५ मिनेटमा नै कोभिड नेगेटिभ पोजेटिभ पत्ता लगाउन सकिने किट्स द. कोरियाले बजारमा ल्याएको छ।
यो किट्स कोरियाको बजारमा उपलब्ध भए पछि अहिले जस्तो कोरोना टेस्ट गर्न अस्पताल वा हेल्थ पोस्टमा सम्म जानु नपर्ने कोरियाका सञ्चार माध्यमले जनाएको छ।नयाँदैनिकी
March 1, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने